जब सम्म यो देशमा रास्ट्रपति, प्रधानमन्त्री उच्च तहका नेताका छोरी चेली पीडित बन्दैनन, तब सम्म हजारौ निर्मलाहरु बलात्कारमा परी नै रहनेछन् । र जुन सुकै सरकार आए पनि तमासा देखाइरहने छ ।
भारतले सिमा मिच्दा, तारबार उखेल्दा, नेपाली कुट्दा भाग्ने सुरक्षाकर्मी नागरिकले न्याय माग्दा गोलि चलाउँछन् । आखिर के का लागि ? नागरिकले न्याय माग्न पाउँदैनन् र सरकार ?
नविन अधिकारी / युएई
म नेपालबाट ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्ट सकेर हाल दुवईमा किचनमा सेफको रुपमा कार्यरत छु । नेपालमा प्राविधिक पढाइ भएकाले होला यहाँ काम र सबै कुरा कन्ट्रयाक्ट अनुसार नै पाएको छु । समग्रमा भन्दा दुवई बसाई खुशीमा नै बित्दै छ । यसको मुख्य कारण भनेको मेरो दक्षता र सीप हो जस्तो लाग्छ । विदेश आउने सबैले सीप सिकेर आउँदा र...
नागरिकलाई मनलाग्दि चर्काे कर लगाएर आफूले मोज गरियो भन्ने ट्विट धन्न गरेन छन प्रधानमन्त्रीले । नागरिकलाई यति धेरै दुख दिएर आफू चाही बिलासि जीवन बिताउने अनि उल्टै यो र त्यो गरे भनेर गफ दिने । कर लाउन भन्दा अगाडि नागरिकलाई कर तिर्न सक्ने बनाउनु पर्छ भन्ने किन नसोच्या होला प्रधानमन्त्री ज्युले ।
अहिले शहरका स्कुल र गाउँका बोडिङ स्कुलमा अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन हुँदै आएको छ । सबै स्कुलमा नेपालीसँगै अंग्रेजी माध्यमलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाएमा राम्रै हुन्थ्यो होला । हामीले नेपाली भाषालाई पनि चटक्कै माया मार्नु हुन्न अनि विश्वब्यापी बनेको अंग्रेजी भाषालाई पनि हेला गर्नुहुन्न । त्यसैले रा...
अबको १० बर्ष लगातार कुलमान घिसीङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारिणी अनि ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने हो भने विधुत प्रधिकरण दक्षिण एशियाकै एक उहाहरणीय प्राधिकरण हुने निश्चत छ ।
पुनम नामजाली मगर
गाउँ गाउँमा होइन अब नेपालीलाई युरोप तिर पो रोजगारको सिर्जना हुन लागेछ । भाषणमा त अब नेपाली युवाहरुले वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जान नपर्ने कुरा गर्छ, व्यवहारमा अर्कै हुन्छ । सरकार गरीब नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर नेपालमा विकास र समृद्धि नारा किन दिन्छौ ?
गौरब जंग कुँवर
यो मुलुकी ऐन जन जनमा पु¥याउनका लागि अर्को बर्ष ८, ९ र १० कक्षाको पाठ्यक्रममा समाबेश गरियोस । साथै व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरेर अपराधीलाई ठाउँको ठाउँ कारबार्ही भएको सुन्न र देख्न पाइयोस् । अनि मात्रै देशमा पनि कानुन छ भन्ने महशुस हुनेछ हामी नागरिकलाई ।
डाक्टरले दाहिने खुट्टाको अप्रेसन गर्नु पर्नेमा देब्रेको गरिदिन्छन्, मृगौलाको पत्थरी फाल्नुपर्नेमा पाठेघर नै फाल्दिन्छन्, अनि अपरेसन गरेपछि कैची, कपडा भित्रै छोड्ने, गलत उपचार गर्नेलाई कारवार्ही हुने कानुनको विरोध गर्नु भनेको अपराध गर्न पाउनुपर्ने माग हो । यस्तो मात्र गर्नेहरुले पेशा त्यागे पनि फरक पर्दैन ।
आरोन लक्सम लिम्बु
११ वर्षीय बालक हत्या भन्दा हत्याराको बचाउमा लागेका व्यक्तिले के चाहेका छन् । आगामी दिनमा पनि अपहरण बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधलाई स्थान दिऔं भन्ने हो ? होईन भने किन अपराधीको पक्षमा वकालत ?
जथाभावी बाटो बनाउनाले धेरै घर परिवारको उठिबास भएको छ,भने धेरैले अनाहकमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । सरकारले बाटो बनाउनु भन्दा पहिले देशभरी कहाँ बाटो बनाउन सकिन्छ, कहाँ सकिदैन भनेर किन भौगोलिक अध्ययन गर्दैन । यति गर्ने हो भने धेरै नेपालीको अनाहकमा जान जाने थिएन ।
देशमा भ्रष्टाचार र वलात्कार दिनदिनै बढिरहेको छ । हत्या, हिंसा पनि कम भएको छैन । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह कछुवा गतिमै छ । पुनः निर्माण र बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको वास्ता छैन । करको भारी बोक्नै नसक्ने गरी नागरिको पिठ्युँमा चडाईएको छ । संविधान पछि केके न परिवर्तन आउछ भनेर कुरेर बसेका नागरिक संविधान...
भारतले हाम्रो देशको सिमाना मिचेको खबर दिनहु सुन्छु । मलाई यस्तो लाग्छ की मेरो मुटुको टुक्रा नै चुडेर लग्यो । पत्रकारहरुलाई पनि लाग्छ होला, लाग्छ भने किन देशका ठुला देश चलाउने ठेकेदार सामु पुर्याउनु हुन्न, अनि दबाब दिनु हुन्न । हजारौ नेपाली सुकुमबासी भैसके यस्तै पारा हो भने कुनै समय हामी सारा नेपाली शरणार्थी बन्...
अर्जुन कुश्मी ठाकुर
नेताहरु सत्ताको चलखेल र भत्ता पचाउन ब्यस्त भएपछी, अरु के नै हेर्थे र ! गरिब नागरिक बाँचोस कि मरोस । गर्ने नै भए नागरिकको लागि भरपर्दो उपचार सेवा देउ सरकार । नागरिकले तपाईहरुलाई घुम्ने कुर्सीमा बस्न र हावादारी भाषण गर्न भोट दिएका होईनन् ।